Ipa kubatwa kwehuni kune yako Apple Watch netambo idzi | Ndinobva mac
Ipa yako Apple Tarisa kubata kwehuni netambo idzi
Sezvo nguva inopfuura, sarudzo dzakawanda dzinowanda dzinoonekwa maererano nemhando dzemabhande atinogona kushandisa neApple Watch yedu. Mune ino kesi ini ndawana pamambure sarudzo yakagadzirwa nematanda inoita yedu Apple Watch zvinotaridzika chaizvo zvakasiyana nezvatajaira.
Sezvauri kuona mumifananidzo yakasungirirwa, pfungwa yacho yakafanana neye tambo yesimbi asi nehukama hwakagadzirwa nematanda. Tine zvakare matatu akapedzisa, tichifunga huni hwese hwavakagadzirwa.
Kana iwe uchida kupa kutsva kutsva kwezhizha kuneako Apple Watch iyo tambo tambo sarudzo sarudzo yakanaka kwazvo. Tambo iyi yakaitwa ne100% yematanda uye ine kuvhara kwakasimba uye kuri nyore kunoita kuti ive tambo yakasarudzika.
Tine iwo anowanikwa mune matatu-mavara huni, imwe yakasviba nhema, imwe mune yakajeka huni uye imwe iri mahogany. Pasina kupokana sarudzo nhatu dzinopa kutaridzika kutsva kune mudiki kubva kuCupertino. Sarudzo iyo yatinobatanidza kwauri mune ino chinyorwa Izvo ndeye 42mm Apple Watch uye Iyo ine mutengo ungangoita 19 euros. Nezve anchorage kuApple Watch isu tine zvakajairika zvinowanika zvinobatanidza izvo zvatinogona zvakare kuwana pamambure ekuzvishandisa nechero rudzi rwechinyakare tambo.
Saka kana iwe uchida kuti munhu wese aone ruoko rwako, tora nhanho uye odha tambo yako yemapuranga yeApple Watch izvozvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Ipa yako Apple Tarisa kubata kwehuni netambo idzi
Apple Mepu inowedzera ruzivo nezve nzvimbo dzekuhaya mabhasikoro uye nzvimbo dzekuchaja mota muEurope
Nguva Machine haina kukwanisa kuita backup. Dambudziko nemhinduro yakaoma